Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe » Iindaba zaseKhanada eziziiNdaba » I-Canada ibhengeza ukwandiswa kokuvalwa kwe-flight e-India
Airlines • isikhululo • uhambo ngomoya • Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Ukuhamba ngeshishini • Iindaba zaseKhanada eziziiNdaba • Iindaba zikaRhulumente • Iindaba zeMpilo • Icandelo lokungenisa izihambi • Iindaba zaseIndiya eziQhekezayo • iindaba • abantu • Ukwakha kwakhona • Xanduva • Safety • Tourism • uthutho • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • Iindaba zeWired Travel • komzila Ngoku
ICanada yazisa ngolwandiso lokuvalwa kwenqwelomoya eIndiya
Njengoko iCanada ilungiselela ukubuya kweenqwelomoya ngokuthe ngqo ukusuka eIndiya ukuya eCanada, Ezothutho Canada zibhengeza ukongezwa kweSaziso esiya eAirmen (NOTAM) esithintela zonke iinqwelomoya zokuhamba kunye nezabucala zabakhweli eCanada ukusuka eIndiya kude kube nguSeptemba 26, 2021, ngo-23: I-59 EDT.
Njengoko iCanada ilungiselela ukubuya kweenqwelo moya ezisuka eIndiya zisiya eCanada, iTrans Canada iyabhengeza ukongezwa kweSaziso esiya eAirmen (NOTAM) esithintela iinqwelomoya eCanada zisuka eIndiya.
Wonke umntu waseCanada uyacetyiswa ukuba aphephe ukuhamba okungabalulekanga ngaphandle kweCanada-ukhenketho lwamazwe aphesheya lwonyusa umngcipheko wokuchaphazeleka, kunye nokusasazeka kwe-COVID-19, kubandakanya nosulelo olubangelwa ziiyantlukwano ezintsha.
Imida kunye nemilinganiselo yezempilo yoluntu nayo ihlala ixhomekeke ekutshintsheni njengoko imeko yesifo iguquka.
ICanada iyaqhubeka nokuthatha umngcipheko osekwe emngciphekweni kunye nendlela yokulinganisa ukuvula umda ngelixa ubeka phambili impilo nokhuseleko lwabo bonke abantu eCanada.
Njengoko iCanada ilungiselela ukubuya kweenqwelo moya ezisuka eIndiya zisiya eCanada, Ezothutho Canada ubhengeza ukwandiswa kweSaziso esiya eAirmen (NOTAM) esithintela zonke iinqwelo moya zabakhweli nezabucala eziya eCanada zisuka eIndiya kude kube nguSeptemba 26, 2021, ngo-23: 59 EDT.
Nje ukuba kuthintelwe ukuhamba ngenqwelomoya ngokuthe ngqo, abahambi abafanelekileyo ukungena eCanada baya kuba nakho ukukhwela iinqwelomoya ezisuka eIndiya ziye Khanada ngala manyathelo ongezelelweyo alandelayo:
Abahambi kufuneka babe nobungqina bovavanyo lwe-COVID-19 olubi lweemolekyuli ezivela kulwamkelo ILebhu yokwahlulahlula kwisikhululo seenqwelomoya iDelhi esithathwe ngaphakathi kweeyure ezili-18 zokumka kwabo ngenqwelomoya eCanada.
Ngaphambi kokubhoda, abaqhubi beenqwelo moya baya kujonga iziphumo zovavanyo zabahambi beqinisekisa ukuba bakulungele ukuza eCanada, kwaye abagibeli abagonywe ngokupheleleyo bakhuphele ulwazi lwabo kwiapp ye-ArriveCAN okanye kwiwebhusayithi. Abahambi abangakwaziyo ukufikelela kwezi mfuno baya kunqatshelwa ukukhwela.
Njengenyathelo lokuqala, ngoSeptemba 22, 2021, iinqwelomoya ezintathu ezivela ngqo e-India zizakufika eCanada kwaye bonke abakhweli kwezi ndiza baya kuvavanyelwa i-COVID-19 xa befika ukuqinisekisa ukuba amanyathelo amatsha ayasebenza.
Emva kokuqala kwakhona kweenqwelomoya, abahambi abafanelekileyo ukungena eCanada bemka eIndiya Khanada ngokusebenzisa indlela engathanga ngqo kuya kuqhubeka kufuneka ukuba kufunyanwe, ngaphakathi kweeyure ezingama-72 zokumka, uvavanyo olubi lwe-COVID-19 lweemolekyuli ezivela kwilizwe lesithathu- ngaphandle kweIndiya- ngaphambi kokuqhubeka nohambo lwabo oluya eCanada.
Wonke umntu waseCanada uyacetyiswa ukuba aphephe ukuhamba okungabalulekanga ngaphandle kweCanada-ukhenketho lwamazwe aphesheya lwonyusa umngcipheko wokuchaphazeleka, kunye nokusasazeka kwe-COVID-19, kubandakanya nosulelo olubangelwa ziiyantlukwano ezintsha. Imida kunye nemilinganiselo yezempilo yoluntu nayo ihlala ixhomekeke ekutshintsheni njengoko imeko yesifo iguquka.